Filtrer les éléments par date : lundi, 22 avril 2019
lundi, 22 avril 2019 19:39
EKAR NDL Ambatomiady - Antanifotsy: Notoloran'ny filoha Rajoelina mivady lakosoly be 250kg
Niara-nankalaza ny Paka niaraka tamin'ny mpino Katolika tao amin'ny EKAR Notre Dame de Lourdes Ambatomiady, ny filoha Andry Rajoelina mivady ny Alahady 21 aprily.
Distrika vaovao vao noforonina eto amin'ny Diosezin'Antsirabe Ambatomiady. Nanampy ny Kristianina teto tamin'ny fananganana trano Fiangonana i Andry Rajoelina, ary nanamafy izany ny fanomezany lakolosy goavana izay milanja 250kg ho an'ny EKAR Ambatomiady.
Nanome toky ihany koa izy fa hanolotra dabilio ho an'ny sekoly vaovao vao naorina eo an-tampon-tanànan’ny Kaominina Ambatomiady.
Toy izany koa ny hanafainganana ny fanamboarana ny lalana mampitohy an’Antanifotsy sy Ambatomiady, izay ratsy dia ratsy tokoa.
lundi, 22 avril 2019 19:24
Toamasina: Rongony mahery vaika 40kg saron'ny Polisy
"Héroïnes" na rongony mahery vaika 40 fonosana amin'ny 01kg avy no tra-tehaky ny Polisin'ny FIP teto Toamasina io tolakandro io.
Niainga tao Sainte Marie ireo teratany afrikanina dimy lahy nitondra azy, anisany ireto roalahy amin'ny sary ireto. Natao anaty valizy roa ireo rongony mahery vaika
Androany tamin'ny 05ora maraina no niala tao Sainte Marie ny sambo kely "El Condor" nitondra azy ireo, ary tamin'ny 07ora maraina no nigadona tao Mahambo ary notsenaina fiara 4x4 marika Range Rover miloko volombatolalaka (gris), manana laharana roa.
Ny sampam-pitsikilovana CIS no nahazo ny vaovao, izy ireo no nampita izany tamin'ny ladoany, ary ireto farany nampilaza ny FIP, ka tratra teo amin'ny sakana fanaon'ny FIP tao Ambalamanasy ilay fiara androany tamin'ny 01 ora tolakandro ary natolotra ny ladoany.
lundi, 22 avril 2019 18:30
Fitsapankevi-bahoaka: Miantso ny mpisehatra politika mba ho tan-dalàna ny KMF/CNOE
Naneho ny heviny KMF/CNOE eo anatrehan'ny didim-panjakana laharana 2019-790 izay noraisina nandritra ny Filankevitry ny Minisitra ny Zoma 19 aprily 2019 teo, manaika ny mpifidy handatsa-bato ho Fitsapankevi-bahoaka hanitsiana ny Lalampanorenana malagasy. Mampahatsiahy sy miantso ny mpisehatra politika rehetra ho an'ny Firenena, ny KMF/CNOE "Fanabeazana olom-pirenena" mba hanaja ny lalàna velona amin'ny mety ho fanatontosàna, na tsia, izany "Fitsapankevi-bahoaka" izany.
Tany tan-dalàna no tiantsika hisy eto, hoy hatrany ny KMF/CNOE koa "mihevitra izahay fa mahasoa kokoa ny fanarahana ny lalàna velona, ka hahatontosan’ny fifidianana solombavambahoaka tsy ho ela, sy ny mety hanatanterahana ny Fitsapankevi-bahoaka amin'ny fotoana mety, manaraka ny fepetra voalazan'ny lalàna sy nakana ny hevitry ny hery velona eto amin'ny tany sy ny firenena".
lundi, 22 avril 2019 18:26
Fetin'ny Paska: Manararaotra nampakatra sarandalana ireo mpitatitra amin'ny zotra rezionaly RN5
Sarandalana tokana ny mihatra ho an'ny zotra mianavaratra manaraka ny Mahavelona RN5 miazo an'i Foulpointe sy Fenoarivo Atsinanana, dia 15 000 Ariary izany raha teo aloha, mbola 10 000 Ariary ny mandeha Fenoarivo Atsinanana ary 5 000 Ariary ny sarandalana Toamasina - Mahavelona Foulpointe.
Raha ny fanazavana azo dia ny faharatsian'ny lalana ny anton'io fisondrotana io.
lundi, 22 avril 2019 18:07
Fenoarivo Atsinanana: Mpanao vakansy telo mianaka natelin'ny ranomasina
Avy any Antsirabe izy ireo, tovovavy 14 taona sy 17 taona ary ny rain'izy ireo, no tonga hiala sasatra taty Fenoarivo Atsinanana no izao tra-doza izao.
Tao Ampasipotsy no niseho ny loza ny alahadin'ny Paka atoandro.
Nentin'ny onja teny afovoan'ny ranomasina ireto tovovavy. Niantso vonjy izy ireo rehefa tsy nahatohitra ny rano hiverina. Namonjy azy ireo ny rainy kinanjo niara-natelin'ny ranomasina izy telo mianaka.
Omaly tamin'ny 02 ora tolakandro no hita ny nofo mangatsiakan'izy roa vavy, efa alina kosa vao hita ilay Raim-pianakaviana.
lundi, 22 avril 2019 17:54
Journée Mondiale de la Terre.
lundi, 22 avril 2019 17:48
Soamandrakizay: Miroso ny fanamboarana ny toerana handraisana ny Papa François
Efa am-perinasa tanteraka ireo mpanamboatra ny toerana andraisana ny Papa François, izay toerana an'ny Ekar fa noraisin'i Filoha Andry Rajoelina an-tanana ny fanamboarana azy, satria filoham-panjakana ihany koa ny Papa.
Nambaran’ny Solontenan'ny Fiketrahana masina monina sy mipetraka eto Madagasikara, teo amin'ny Nonciature Ivandry, ny Alarobia 27 marsa tolakandro moa fa hanao fitsidihina apostolika eto Madagasikara ny Papa Ray Masina François, ny 6 ka hatramin'ny 8 septambra 2019.
Avy atsy Mozambika ny Papa no ho avy hamangy an’i Madagasikara. Izy no Ray Masina Katôlika faharoa taorian’i Papa Joany Paoly II (1989) hitsidika an’i Madagasikara. Ny Fivondronamben'ny Eveka no mizaka ny fandaniana ara-bola, hoy ny Nonce Apostolique izay Masoivohon'i Vatican eto amin'ny Ranomasimbe Indianina.
lundi, 22 avril 2019 11:51
Sri Lanka: 24 personnes arrêtées, 290 morts, 500 blessés
Le bilan de l'explosion dans l'Eglise Catholique Saint-Antoine à Colombo lors de la messe des Pâques hier dimanche 21 avril 2019, s'alourdie, 290 morts, 500 blessés.
Pour l'instant, pas de revendication, mais 24 personnes ont été arrêtées par la police. On soupçonne un jeune homme kamikaze qui s'est fait explosé avec un gros sac à dos.
Des bombes ont explosé aussi dans 4 hôtels de la ville et 2 autres églises.
lundi, 22 avril 2019 11:09
Masindray Fambolen-kazo: Zanakazo 1000 isa no nambolen'i Lanto RAKOTOMANGA sy ireo mpiara-dia aminy
Notontosaina taty Masindray ny fambolen-kazo niaraka tamin'ny kandida ho solombavambahoaka Lanto Rakotomanga sy ireo mpiara-dia aminy. Tafiditra anatin'ny programanasan'ny Filoha Andry RAJOELINA tokoa izany hoy i Lanto RAKOTOMANGA, tsy maintsy mandray andraikitra isika hoan'ny taranaka fara mandimby ary koa hoan'ny firenena.
Niara nientana ny tsirairay, na vavy na lahy, na tanora na be antitra tamin'ny fanatanterahana izany. Natao ihany koa izany fambolen-kazo izany ho firaisankinan'ny tsirairay ary ho mariky ny fifankatiavana.
lundi, 22 avril 2019 08:41
Toamasina I: Feno ny fandaharam-potoanan'i Naharimamy Irmah ny andron'ny Paska
Nahazo fanasana tamin'ny fiangonana mirahavavy, ny Fiangonana Anglikanina, sy i Kristy Fehizoro Tanambao 5, ny kandida ho solombavambahoaka Irmah Naharimamy ny marainan'ny alahadin'ny Paska.
Notohizany tamin'ny fanomezam-boninahitra ny fanasan'ireo Zanaky Vakinankaratra teto Toamasina izany avy eo.
Ary ny tolakandro dia nizara amboara sy kopy, tao amin'ny stade municipal, tamin'ireo tanora mpanao fanatanjahan-tena Irmah Naharimamy, vao niara-nifety tamin'ny fianakaviany amin'izao andron'ny Paska izao.